Kooxda Paris Saint-Germain oo bedelka Neymar Jr ka dhex-aragta Liverpool… (Waa kee Weeraryahanka ay doonayso inay kala soo wareegto Reds?) – Gool FM
(Paris) 10 Dis 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la soo sheegayaa inay bedelka ciyaaryahankeeda Neymar Jr ka dhex aragto Liverpool.
Kooxda haysata horyaalka Faransiiska ee PSg ayaa indhaha ku haysa Sadio Mane kaasoo aragto bedelka xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr.
France Football iyo Mundo Deportivo ayaa isku raacay in Paris Saint-Germain ay xiddiga kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Sengal ee Sadio Mane ka dhiganayso bedelka Neymar Jr haddii laacibkan reer Brazil uu tago xagaaga soo socda.
Xaaladda Neymar Jr ee caasimada Faransiiska ayaan daganayn bilihii ugu dambeeyay, waxaana lagu soo waramayaa inuu wali doonayo inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Barcelona.
Haddii uu 27-sano jirkaasi baxo kaddib Mane waxaa loo arkaa inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee PSG, inkastoo Liverpool xitaa aysan tixgelin doonin dalab ka yar 100 milyan oo euro oo u dhiganta 84 milyan oo gini ama 111 milyan oo dollar.
Zlatan Ibrahimovic oo la soo warinayo inuu doortay kooxdii uu ku biiri lahaa